Linux Mint 19.1 Tessa Yakaziviswa, Kuuya Mbudzi kana Zvita 2018 | Kubva kuLinux
Linux Mint 19.1 Tessa yakaziviswa, ichiuya munaNovember kana Zvita 2018
Iyo Linux Mint projekiti nhasi yazivisa iyo codename uye inofungidzirwa kuburitswa nguva yayo yekutanga kugadzirisa kugadzirisa yeLinux Mint 19 akateedzana, Linux Mint 19.1.
Kubva pane yazvino Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, Linux Mint 19.1 ichadaidzwa kuti Tessa uye inotarisirwa kusvika mukupera kwaNovember kana kutanga kwaZvita, sezvakataurwa naClement Lefebvre.
Lefebvre akataura zvakare kuti Linux Mint 19.1 Tessa ichave nerutsigiro kwemakore mashanu, kusvika 2023, uye kuti vashandisi veLinux Mint 19 Tara vachakwanisa kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni vachishandisa yekuvandudza turu inosanganisirwa muchirongwa.
"Kuburitswa kwechipiri muLinux Mint 19.x dzakateedzana kuchadaidzwa kunzi Tessa, kuchaburitswa muna Mbudzi kana Zvita wegore rino uye kunotsigirwa kusvika muna 2023," Clement Lefebvre akanyora muchinyorwa pakutanga kwanhasi.
Linux Mint 19.1 Tessa iri kuuya neCinnamon 4.0
Pakati pekuvandudza kwakawanda uye nhau dzinouya neLinux Mint 19.1 Tessa, tinogona kutaura iyo kusanganisirwa kweCinnamon 4.0 graphical nharaunda, pamwe neyakagadzirwazve Software Source chishandiso - Software Zvinyorwa - iine Xapp padivi uye zita rebha.
Iyo Software Source chishandiso ichave nechikamu che "Mafonti ekusarudzika", Zvakare pamwe nesarudzo nyowani kuitira kuti vashandisi vawedzere zvavanochengetera pasina kunetseka kwakanyanya, kuchinjira kuchisarudzo chevanogadzira e Ivo vanofanirwa kutamisa zviratidzo zvekukanganisa uye dbgsym repositories.
Iyo yekusarudzika theme theme Mint-y ichagadziridzwa zvakare Nekusvika kweLinux Mint 19.1 Tessa, musiyano uchavandudzwa nekuita iyo yekumashure mavara kuva nerima, izvo zvinobvumidza iwo mavara kuti abude pachena zvakanyanya, sekukumbirwa nharaunda yemushandisi. Zvimwe zvakawanda pane ino inotevera vhezheni yeLinux Mint ichaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Linux Mint 19.1 Tessa yakaziviswa, ichiuya munaNovember kana Zvita 2018
Slimbook Kymera: kuvhurwa kwerudzi rutsva rweLinux desktops
Maitiro ekusetazve iro password password kana iwe uchikanganwa